Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Tilmaamaha Kushiinka Jikada iyo Qalabka Iibsiga
2020 / 09 / 15 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1133 0
Qasabada biyaha waa mid ka mid ah waxyaabaha jikada jikada loogu isticmaalo. Maxaan fiiro gaar ah u leeyahay markaan wax iibsanayo? Qalabkee ayaan u dhigmaa? Markaad qorsheyneyso jikadaada riyada, waxaad ku raagi doontaa dhowr shaqooyin iyo qaabab kala duwan. Marabtaa inaad doorato qasabada saxda ah ee kugu habboon adiga? Hoos waxaan kaa caawin doonaa inaad soo koobto macluumaadka aasaasiga ah ee noocyada kala duwan ee qasabadaha si loo fududeeyo iibsashadaada.
Kala soocida aasaasiga ah ee qasabada
Haddii aad rabto in miiska dushiisa uu hagaagnaado, qasabad derbi ku rakiban ayaa kaa caawin karta inaad ku guuleysato muuqaalkan wanaagsan. Dhowr ka mid ah dhaqankeenna iyo qaabkeenna casriga ah ee tuubbada lagu dhejiyo ayaa loo isticmaali karaa qasabado gidaar ku dheggan.
Soo saarida biyaha iyo heerkulka waxaa gacanta ku haya kabaal. Tuunbada noocan oo kale ah waxaa loogu yeeraa qasab hal-qabsi ah. Haddii aad jeceshahay fududaanida hal koontarool, waad iska hubin kartaa qaabkeena hal gacan. Tuubada noocan ah waxaa laga heli karaa qaababka dhaqanka iyo kuwa casriga ah.
Dad badan ayaa jecel xakamaynta saxda ah ee heerkulka biyaha iyo soo saarista qasabadda laba-qabsiga leh. Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo qaabab gacmeed laba-gacmeed ah oo laga kala xusho. Noocyada wax lagu qabto waxaa ka mid ah qaabka kabaalka, qaabka iskutallaabta ama qaab mindi-gacmeedka oo fudud oo lagu shaqeeyo
Haddii aad jeceshahay miiska dusha lagu raaxeysto ee aan lagu buufin dhinac ama qalab dheeri ah, tuubada hoos loo tuuro ayaa noqon karta xalka saxda ah. Muuqaalka caadiga ah ee tuubada hoos udhacda waa dhererka biiyaha ballaadhan iyo xulashooyinka biiyaha badan - socodka biyaha caadiga ah, buufin iyo hakad-aadna u fudud in la isticmaalo.
Tuubada la soo jiido waxay bixisaa shaqo la mid ah nooca hoos loo jiido, waxayna leedahay aag soo jiidasho ballaaran. Haddii aad rabto aag badan oo qabsan, qasabad laga soo jiito ayaa laga yaabaa inay kuugu habboon tahay isticmaalkaaga.
Adduunyada wowow, waxaad ka heli kartaa tayada nolosha, tafaasiisha saxda ah, raaxada xaddidan, iyo quruxda farshaxanka iyo nolosha. Fikradda xarrago leh ee farshaxannimadu keentay ee wowow, waxsoosaar kastaa wuxuu fahmayaa waaya-aragnimada maansada ee nolosha, wuxuu si dhammaystiran isugu daraa boqortooyada bilicsanaanta teknolojiyad caqli leh, oo aan dhammaad lahayn una dhow xasilloonida dabeecadda, wuxuuna dadka u oggolaanayaa inay si buuxda uga takhalusaan buuqa adduunka. Dhammaadka taxanaha wowowVibrant waa la sifeeyey, taas oo quruxda ku dari karta jikadaada iyadoo waliba adkaysanaysa. Taxanaha birta ah ee 'Tibran titan' ee hoos ku qoran wuxuu si sax ah u gudbinayaa quruxda fudeydka casriga ah waana xulasho wanaagsan qasabadaha jikada.
Ku rakibidda biyaha la cabbo iyo qasabadda cabitaanka oo leh nidaam shaandheeye ayaa u horseedi kara ku habboonaanta jikada heer cusub. Waxaan ku siinaa nidaamyada biyaha qabow iyo kuwa biyaha kulul shaah deg deg ah ama kookaha. Nidaamka kala shaandheynta hadda waa mid waajib ku ah nolosha guriga.
Tuubada noocan ahi waxay si weyn ugu habboon tahay karinta qoyska. Gidaarka ama saxanka nooca maraq qasabadaha buuxiya inta badan waxaa lagu dhejiyaa meel u dhow ama ka sarreysa shooladda, taasoo kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh biyo ugu darto dheriga maraq adigoon dheriga gadaal iyo gadaal u dhaqaajinin saxanka.
saabuun saabuun ah
Waxaan bixinnaa qaabab kala duwan iyo qalab qurxin si aan u kobcinno xulkeenna qasabadaha oo aan ugu darno howlaha aagga saxankaaga. Qalabka saabuunta / saabuunku wuxuu jikadaada ka dhigi karaa mid aad u nadiif ah oo nadiif ah
Hore:: Naqshadeynta Aragtida ee abuureysa gudaha qaabka Bal Harbor ee Hill Tide Estates Next: Tilmaamaha Iibsiga Qasabada
2021 / 05 / 13 1671
2021 / 05 / 09 1305
2021 / 05 / 08 1235
2021 / 02 / 04 1028
2021 / 02 / 03 985
2021 / 02 / 03 1052